ကြံတောမှသည်... ရေဝေးဆီသို့..ပရလောကသားတို့ ချီတက်ကြရာ - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပရလောကအကြောင်း / ကြံတောမှသည်... ရေဝေးဆီသို့..ပရလောကသားတို့ ချီတက်ကြရာ
ကြံတောမှသည်... ရေဝေးဆီသို့..ပရလောကသားတို့ ချီတက်ကြရာ
Apann Pyay 11:04 PM ထူးဆန်းထွေလာ , ပရလောကအကြောင်း Edit
ကြံတောသင်္ချိုင်းကနေ ရေဝေးသင်္ချိုင်းကိုပြောင်းတုံးကတွေ.ကြုံရတာကို သူငယ်ချင်းရဲ့ ဦးလေး တယောက်ပြောပြတာကိုပြန်ပြောပြပါ့မယ်၊ သူတို.ကပရမှာTE11မောင်းရတော့ တညနေ(၃)နာရီလောက် မှာ ခွဲမှူးကဒီနေ.ညဂျူတီရှိလို.ကားမောင်းသမား(၃၅)ယောက်ကိုပေးမပြန်ဘဲဝင်းထဲမှာဘဲထမင်းကျွေး လ္ဘက်ရည်တိုက်ပြီး၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဘယ်သူမှမသိဘဲ၊
ည(၇)နာရီလောက်မှာmazda jeep စစ်ကားတစီးဦးဆောင်ပြီးစစ်ကားTE11 ၁၅စိးနှင့်ကပရမှTE11၂၅စီး တစုတဝေးနှင့် ကြံတောကိုမောင်းတော့မှသိရပါတော့တယ်၊အင်းစိန်ကားဝင်းထဲကထွက်လာပြီး ယ ခု ဘုရင့်နောင်ဈေးနေရာရှေ.မှာကားတွေအားလုံးစုပြီး ခဏရပ်နေပါတယ်၊ ခဏနေတော့မာစဒါဂျစ်ထဲ မှ ဗိုလ်ကြီး ယူနီဖောင်းနှင့်ဆင်းလာပြီးTE11 စစ်ကားပေါ်မှအာမီရမ်၂ပုံးကို စစ်ကားယာဉ်မောင်း၎ဦး မှ မလာပြီး ကားတစီးလျှင်၂ပုလင်းစီပေးပါတယ်၊ ထိုအချိန်က ဘုရင့်နောင်ဈေးတောင်မဆောက်ရသေးဘဲ လူခြေအတော်တိတ်ပါတယ်၊
ကားသမားတွေအားလုံးအရက်ကိုယ်စီသောက်ကျပြီးမသောက်တတ်တဲ့ လူ(၃)ယောက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီးချိန်တွင် ယာဉ်တန်းကို စတင်မောင်း လာကြရာ ကြံတောသင်္ချိုင်းထဲကိုည(၈)နာရီတိတိမှာရောက်ရှိပြီးကားအစီး၄၀လုံးတန်းစီးပြီးရပ်ထားလိုက်ပါ တယ်၊ခဏအကြာမှာ တပ်ကြပ်ကြီးတဦးမှဦးဆောင်ပြီး တသုတ်ကား၁၀စီးဆီလူခွဲပြီးမြန်မာသင်္ချိုင်းကနေ စပြီးကား၁၀စီးကိုတန်းစီ ထားပြီးရပ်ထားပါတယ်၊ခဏနေမာဇဒါဂျစ်ပေါ်ကနေဆင်းလာ တဲ့ဗိုလ်ကြီးကစာရွက်၂ရွက်ကိုင်ပြိး၊သင်္ချိုင်းဘက်လှည့် အမိန်.ပြန်တန်းဖတ်ပါတယ်၊ပြီးတာနှင့်တပ်ကြပ်ကြီး ကတန်းစီထားတဲ့ကား၁၀စီးရဲ့နံပါတ်တွေဖတ်ပြပြီး “အားလုံးတက်ကြ” လို.အော်ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ကား၁၀ စီး လုံးအလွှတ်တွေဘဲမြင်ရပြီး ကားတွေတအိအိနှင့် အသံတွေကိုကြားနေရပါတယ်၊၁၀မိနစ်လောက် ရှိတော့ တပ်ကြပ်ကြီးက ဒရိုင်ဘာတွေတက်ခိုင်းလိုက်ရာပြသာနာစပါတော့တယ်၊ ရှေ.ခန်းမှာဘာမှ မမြင်ရ ဘဲ အထဲလုံးဝ ၀င်လို.မရတော့ပါ၊
ခဏနေတပ်ကြပ်ကြီးကလာပြီး "ရှေ.ခန်းမှာလူများနေတယ်တယ်၊နောက်ကိုသွား "လို.ပြောလိုက်မှ ဒရိုင်ဘာဝင်ထိုင်လို.ရပါတယ်။ ကားတွေအားလုံးစက်နိုးပြီးထွက်မလို.လုပ်တာလုံးဝထွက်လို.မရတော့ဘဲ၊ကားပေါ်မှာအလေးကြီးတင်ထားသလိုလီဗာကိုနင်းပေမဲ့လုံးဝမရွေ.ပါ၊ ကားမောင်းသမားတွေလဲအရက် ရှိန်နှင့်ဖြစ်နေပေ မဲ့ နည်းနည်းကြောက်လာပါပြီး၊ တပ်ကြပ်ကြီးကထပ်မံပြီးအော်သံထွက်လာပါတယ်၊
“အားလုံးပြီးအောင်ပို.ပေးမယ်” လို.အော်ပြောလိုက်တော့မှ ကားက အိကျနေရာမှပြန်တက် လာပြီးမကြာ ခင်ကားစတင်ထွက်လာနိုင်ပါတော့တယ်၊ အဲဒီနေ.ညကားအစီး၄၀နှင့်တညလုံးအခေါက်၃၀ကျော်ပို.ပေး ရပြိးမနက်၎း၃၀ကျမှနားလိုက်ရပါတယ်၊အဲဒီလိုမျိုး၃ရက်မောင်းပေးရ ပါတယ်၊
နောက်နေ.ကျတော့နောက်တစ်ဖွဲ.ကိုခေါ်ပါတယ်၊နောက်ဆုံးနေ.ကျမှပြသာနာထပ်တက်တာကို ထပ်ပြော ပါအုံးမယ်။ သုံးရက်မြောက်နေ့......(နောက်ဆုံးနေ.)မှာည(၈)နာရီလောက်ကစပြီးမောင်းပေးရာ စမောင်းတော့ အရင်ရက်ကမောင်းဘူးတော့၊ဒါလောက်မကြောက်တော့ဘဲ၊ပုံမှန်ဘဲမောင်းနေပြီး၊အလှည့်(၉)ခေါက်မြောက်မှာပြသာနာစတက်ပါတော့တယ်၊ တပ်ကြပ်ကြီးက......
“စတက်တော့“အော်လိုက်ပေမဲ့ကားကနည်းနည်းမှမလှုပ်ဘဲ၊အောက်ကိုလဲနည်းနည်းမှ အိမကျ ဘဲငြိမ်နေ ရာကားသမားရောတပ်ကြပ်ကြီးပါ အံသြပြီးမြင်သက်နေရာဘာများဖြစ်လို.လဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီး
တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေပါတော့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ “ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်” တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ တဲ့ ညမှ အသံတိုးတိုးလေးတနေရာမှထွက်လာတာကိုဘဲကြားနေရပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာတပ်ကြပ်ကြီးကဘာကိုစဉ်းစားမိလဲမသိဘဲ၊မီးသဂြိုလ်စက်မှာတာဝန်ကျတဲ့ စည်ပင်ဝန်းထမ်း အား ခုံတခုံလောက်အမြန်ရှာပေးခိုင်းလိုက်ရာ ၀န်ထမ်းလေးက အခေါင်းတင်တဲ့ လေးချောင်းထောက် တခုယူလာပြီးပေးလိုက်ရာ၊ တပ်ကြပ်ကြီးကTE11 နောက်ဖုံးဖွင့်ထားရာအရှေ.သို... သွားထားလိုက်တော့မှ “ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်” အသံပျောက်သွားပြိး၊မကြာခင်ကားလဲအနည်းငယ်အိကျလာပါတော့တယ်၊
အမှန်မှာတပ်ကြပ်ကြီးက ၀ိညာဉ်တွေထဲမှဒုက္ခတတွေကိုထည့်မတွက်မိဘဲ၊သတိမထားမိဘဲခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေက မတက်နိုင်ဘဲအောက်မှာ တဒေါက်ဒေါက်နှင့်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါတဲ့ခင်ဗျား...။
Credit - From Myanmar Cyber Media Forum
ကွံတောသင်ျခြိုငျးကနေ ရဝေေးသင်ျခြိုငျးကိုပွောငျးတုံးကတှေ.ကွုံရတာကို သူငယျခငျြးရဲ့ ဦးလေး တယောကျပွောပွတာကိုပွနျပွောပွပါ့မယျ၊ သူတို.ကပရမှာTE11မောငျးရတော့ တညနေ(၃)နာရီလောကျ မှာ ခှဲမှူးကဒီနေ.ညဂြူတီရှိလို.ကားမောငျးသမား(၃၅)ယောကျကိုပေးမပွနျဘဲဝငျးထဲမှာဘဲထမငျးကြှေး လ်ဘကျရညျတိုကျပွီး၊ ဘာလုပျရမယျဘယျသူမှမသိဘဲ၊
ည(၇)နာရီလောကျမှာmazda jeep စဈကားတစီးဦးဆောငျပွီးစဈကားTE11 ၁၅စိးနှငျ့ကပရမှTE11၂၅စီး တစုတဝေးနှငျ့ ကွံတောကိုမောငျးတော့မှသိရပါတော့တယျ၊အငျးစိနျကားဝငျးထဲကထှကျလာပွီး ယ ခု ဘုရငျ့နောငျဈေးနရောရှေ.မှာကားတှအေားလုံးစုပွီး ခဏရပျနပေါတယျ၊ ခဏနတေော့မာစဒါဂဈြထဲ မှ ဗိုလျကွီး ယူနီဖောငျးနှငျ့ဆငျးလာပွီးTE11 စဈကားပျေါမှအာမီရမျ၂ပုံးကို စဈကားယာဉျမောငျး၎ဦး မှ မလာပွီး ကားတစီးလြှငျ၂ပုလငျးစီပေးပါတယျ၊ ထိုအခြိနျက ဘုရငျ့နောငျဈေးတောငျမဆောကျရသေးဘဲ လူခွအေတျောတိတျပါတယျ၊
ကားသမားတှအေားလုံးအရကျကိုယျစီသောကျကပြွီးမသောကျတတျတဲ့ လူ(၃)ယောကျကိုပွနျလှတျလိုကျပါတယျ။ အားလုံးအဆငျ့သငျ့ဖွဈပွီးခြိနျတှငျ ယာဉျတနျးကို စတငျမောငျး လာကွရာ ကွံတောသင်ျခြိုငျးထဲကိုည(၈)နာရီတိတိမှာရောကျရှိပွီးကားအစီး၄၀လုံးတနျးစီးပွီးရပျထားလိုကျပါ တယျ၊ခဏအကွာမှာ တပျကွပျကွီးတဦးမှဦးဆောငျပွီး တသုတျကား၁၀စီးဆီလူခှဲပွီးမွနျမာ
သင်ျခြိုငျးကနေ စပွီးကား၁၀စီးကိုတနျးစီ ထားပွီးရပျထားပါတယျ၊ခဏနမောဇဒါဂဈြပျေါကနဆေငျးလာ တဲ့ဗိုလျကွီးကစာရှကျ၂ရှကျကိုငျပွိး၊သင်ျခြိုငျးဘကျလှညျ့ အမိနျ.ပွနျတနျးဖတျပါတယျ၊ပွီးတာနှငျ့တပျကွပျကွီး ကတနျးစီထားတဲ့ကား၁၀စီးရဲ့နံပါတျတှဖေတျပွပွီး “အားလုံးတကျကွ” လို.အျောပွောလိုကျပါတယျ၊ ကား၁၀ စီး လုံးအလှတျတှဘေဲမွငျရပွီး ကားတှတေအိအိနှငျ့ အသံတှကေိုကွားနရေပါတယျ၊၁၀မိနဈလောကျ ရှိတော့ တပျကွပျကွီးက ဒရိုငျဘာတှတေကျခိုငျးလိုကျရာပွသာနာစပါတော့တယျ၊ ရှေ.ခနျးမှာဘာမှ မမွငျရ ဘဲ အထဲလုံးဝ ဝငျလို.မရတော့ပါ၊
ခဏနတေပျကွပျကွီးကလာပွီး "ရှေ.ခနျးမှာလူမြားနတေယျတယျ၊နောကျကိုသှား "လို.ပွောလိုကျမှ ဒရိုငျဘာဝငျထိုငျလို.ရပါတယျ။ ကားတှအေားလုံးစကျနိုးပွီးထှကျမလို.လုပျတာလုံးဝထှကျလို.မရတော့ဘဲ၊ကားပျေါမှာအလေးကွီးတငျထားသလိုလီဗာကိုနငျးပမေဲ့လုံးဝမရှေ.ပါ၊ ကားမောငျးသမားတှလေဲအရကျ ရှိနျနှငျ့ဖွဈနပေေ မဲ့ နညျးနညျးကွောကျလာပါပွီး၊ တပျကွပျကွီးကထပျမံပွီးအျောသံထှကျလာပါတယျ၊
“အားလုံးပွီးအောငျပို.ပေးမယျ” လို.အျောပွောလိုကျတော့မှ ကားက အိကနြရောမှပွနျတကျ လာပွီးမကွာ ခငျကားစတငျထှကျလာနိုငျပါတော့တယျ၊ အဲဒီနေ.ညကားအစီး၄၀နှငျ့တညလုံးအခေါကျ၃၀ကြျောပို.ပေး ရပွိးမနကျ၎း၃၀ကမြှနားလိုကျရပါတယျ၊အဲဒီလိုမြိုး၃ရကျမောငျးပေးရ ပါတယျ၊
နောကျနေ.ကတြော့နောကျတဈဖှဲ.ကိုချေါပါတယျ၊နောကျဆုံးနေ.ကမြှပွသာနာထပျတကျတာကို ထပျပွော ပါအုံးမယျ။ သုံးရကျမွောကျနေ့......(နောကျဆုံးနေ.)မှာည(၈)နာရီလောကျကစပွီးမောငျးပေးရာ စမောငျးတော့ အရငျရကျကမောငျးဘူးတော့၊ဒါလောကျမကွောကျတော့ဘဲ၊ပုံမှနျဘဲမောငျးနပွေီး၊အလှညျ့(၉)ခေါကျမွောကျမှာပွသာနာစတကျပါတော့တယျ၊ တပျကွပျကွီးက......
“စတကျတော့“အျောလိုကျပမေဲ့ကားကနညျးနညျးမှမလှုပျဘဲ၊အောကျကိုလဲနညျးနညျးမှ အိမကြ ဘဲငွိမျနေ ရာကားသမားရောတပျကွပျကွီးပါ အံသွပွီးမွငျသကျနရောဘာမြားဖွဈလို.လဲအမြိုးမြိုးစဉျးစားပွီး
တယောကျကိုတယောကျကွညျ့နပေါတော့တယျ၊ ဒါပမေဲ့ “ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ” တိတျဆိတျငွိမျသကျနေ တဲ့ ညမှ အသံတိုးတိုးလေးတနရောမှထှကျလာတာကိုဘဲကွားနရေပါတော့တယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာတပျကွပျကွီးကဘာကိုစဉျးစားမိလဲမသိဘဲ၊မီးသဂွိုလျစကျမှာတာဝနျကတြဲ့ စညျပငျဝနျးထမျး အား ခုံတခုံလောကျအမွနျရှာပေးခိုငျးလိုကျရာ ဝနျထမျးလေးက အခေါငျးတငျတဲ့ လေးခြောငျးထောကျ တခုယူလာပွီးပေးလိုကျရာ၊ တပျကွပျကွီးကTE11 နောကျဖုံးဖှငျ့ထားရာအရှေ.သို... သှားထားလိုကျတော့မှ “ဒေါကျဒေါကျဒေါကျ” အသံပြောကျသှားပွိး၊မကွာခငျကားလဲအနညျးငယျအိကလြာပါတော့တယျ၊
အမှနျမှာတပျကွပျကွီးက ဝိညာဉျတှထေဲမှဒုက်ခတတှကေိုထညျ့မတှကျမိဘဲ၊သတိမထားမိဘဲခွကြေိုးလကျကြိုးတှကေ မတကျနိုငျဘဲအောကျမှာ တဒေါကျဒေါကျနှငျ့ဖွဈနခွေငျးဖွဈကွောငျးပါတဲ့ခငျဗြား...။